Momba an'i Semiramis (voatavo koa Sammu-Ramat)
Mpanjakavavy asyrianina semi-legendary
Tamin'ny taonjato faha-9 TK
Fipoahana: ny mpanjaka lefitra, ny mpiady (na i Ninus vadiny, na ny mpanjaka Ninus, dia ao amin'ny lisitry ny mpanjaka asyrianina, lisitra misy takelaka misy soratra miendri-pantsika fahiny)
Antsoina koa hoe Shammuramat
Herodotus tamin'ny taonjato faha-5 TK. Nanoratra momba an'i Asyria sy Persa i Ctesias, mpahay tantara grika sy dokotera, nanohitra ny tantaran'i Herodotus, tamin'ny taonjato faha-5 TK. Nanoratra ny Bibliotheca historia teo anelanelan'ny 60 sy 30 TK i Diodorus avy any Sicile, mpahay tantara grika.
Justin, mpahay tantara latinina, dia nanoratra ny Historiarum Philippicarum libri XLIV , anisan'izany ny fanazavana sasany teo aloha; Mety nanoratra izy tamin'ny taonjato faha-3. Milaza i Ammianus Marcellinus, mpahay tantara romanina, fa nanamboatra ny hevitry ny eonoka izy, ary nanosika ny ankizilahy ho lasa olon-dehibe.
Miseho amin'ny anaran'ny toerana maro any Mezopotamia sy Asyria ny anarany.
Semiramis dia hita ao amin'ny angano Armeniana.
Nanjaka i Shamshi-Adad V tamin'ny taonjato faha-9 TK, ary nantsoina hoe Shammuramat (tany Akkadianina) ny vadiny. Ady-Nirari III izy nandritra ny taona maromaro taorian'ny nahafatesan'ny vadiny. Tamin'izany fotoana izany, ny Empira Asyrianina dia lehibe lavitra noho ny tamin'ny fotoana nanoratan'ny mpahay tantara azy momba azy.
Ny angano avy amin'ny Semiramis (Sammu-Ramat na Shammuramat) dia mety hanintona ny tantara.
Ny angano sasantsasany dia manana Semiramis nipoiran'ny voromailala tany an'efitra, teraka ny zanakavavin'ilay andriamanibavy trondro Atargatis.
Ny vadiny voalohany dia nolazaina fa governoran'i Ninive, Menones na Omnes. Ninosa i Ninus avy any Babilôna noho ny hatsaran-tarehin'i Semiramis, ary taorian'ny nahafatesan'ny vadiny voalohany nanao famonoan-tena dia nanambady azy izy.
Izany angamba no voalohany amin'ireo fahadisoana lehibe roa nananarany. Ny faharoa dia rehefa nandresy lahatra an'i Ninus i Semiramis, mpanjakan'i Babylona, ​​ankehitriny mba hanao azy ho "Regent for a Day." Dia nataony izany; ary tamin'io andro io dia efa novonoiny izy, ary nalainy ny seza fiandrianany.
Ny Semiramis dia voalaza fa nanana satroka lavitr'andriana iray alina miaraka amin'ireo miaramila tsara tarehy. Noho izany, ny heriny dia tsy atahoran'ny lehilahy iray izay mihevitra ny fifandraisan'izy ireo, dia samy tia ny tiana rehetra izy ireo taorian'ny alin'ny hafanam-po.
Na dia tantara iray ihany aza no nanafihan'ny tafik'i Semiramis sy namono ny masoandro tamin'ny tenany (ao amin'ny anaran'i Er), noho ny heloka tsy hamerenana ny fitiavany. Niangavy ny andriamani-kafa mba hamerina ny masoandro ho velona indray izy.
Semiramis koa dia voaray tamin'ny famerenana ny fananganana an'i Babylona sy ny fandresena ireo firenena mpifanolo-bodirindrina, anisan'izany ny faharesen'ny tafika indianina tao amin'ny Reniranon'i Indus.
Rehefa niverina avy tao amin'io ady io i Semiramis, dia namadika ny heriny tamin'ny zanany lahy Ninyas izay namono azy avy eo. 62 taona izy ary efa niady irery nandritra ny 25 taona teo ho eo (sa 42?).
Ny iray hafa dia nanambady an'i Ninyas zanany lahy ary niara-niaina taminy talohan'ny namonoana azy.
Araka ny hevitr'ilay legioma Armeniana, dia nianjera tamin'ny Arabo, Ara, i Semiramis, ary rehefa nandà tsy hanambady azy izy, dia nitarika ny tafika hiady amin'ny Armeniana, namono azy. Rehefa tsy nahomby ny fivavahany mba hanangana azy tamin'ny maty, dia nanandrana lehilahy hafa toa an'i Ara izy ary nandresy lahatra ny Armeniana fa natsangana tamin'ny maty i Ara.
Ny marina? Asehon'ny firaketana fa tamin'ny andron'i Shamshi-Adad V, 823-811 TK, i Shammuramat mpitondratena, mpitondratena tamin'ny 811 - 808 al.fi, dia maty ny sisa tamin'ny tantaram-piainana, ary ny sisa tavela dia tantara, azo antoka fa tratran'ny grika mpahay tantara.
Ny tantaran'i Semiramis dia nanintona ny saina amin'ny mpahay tantara Grika ihany, fa ny fisainan'ny mpanoratra tantara, ny mpahay tantara ary ny mpilaza tantara hafa tamin'ny taonjato maro lasa. Ny mpanjakavavy mpiady mahery teo amin'ny tantara dia nantsoina hoe Semiramis tamin'ny androny. Ny opera Rosini, Semiramide , dia voalohany tamin'ny 1823. Tamin'ny 1897 dia nosokafana ny Hotel Semiramis tany Ejipta, naorina teo amoron'ny renirano. Mbola toeram-pialan-tsavily amin'izao fotoana izao, akaikin'ny Museum of Egyptology ao Kairo. Boky maro no nanasongadina ity mpanjakavavy mahagaga ity.
Ny Divine Comedy Dante dia manoritsoritra azy ho ao amin'ny faran'ny Helo Faharoa, toerana ho an'ireo izay nanameloka ho any amin'ny helo noho ny fitiavany: "Izy no Semiramis, izay novakianay / Narahina i Ninus, ary izy no vadiny; ankehitriny ny lalàna Sultan. "
Empira Carlotan'i Meksika
Ny biography of Charlotte Brontë
Ny Princess Louise, Princess Royal ary Duchesse de Fife
Iza moa i Saint Eligius (Toeram-ponenana sarobidy)?
Anatomia Homologies and Evolution
Fampidiran-drivotra Carolina University Admissions
Ny 10 nacionalidades de hispanos más exitosas en Estados Unidos
Top John Waite Solo Songs of '80s
Ny ara-panahy amin'ny Swami Vivekananda
Loharano momba ny tantara romanina
Italiana Verbs: Salutare
Inona no atao hoe Rolling Admission?
Maniry Anao Ny Fanomezana An'Andriamanitra: Inona No Loza, Tsy Manan-tany Momba ny Fety Krismasy?
Fantaro ny teny frantsay Une Nana
Ahoana no fomba hifidianana ny sombin-tsakafo tsara indrindra ho an'ny fitantanana sy ny fahefana
Manao ahoana ny habetsahan'ny hazo?
Fahatsiarovana mafana indrindra maneho ny heviny manoloana an'i Chris Christie mavesatra indrindra ny Talata
Pioneer Power-Pop: The Grass root
Albumes de Eminem: Nandritra ny ratsy indrindra
Fichier Einsteinium - Fomba 99 na Es
Ny raharaha Scottsboro: Timeline